Oke osimiri kacha mma na Ibiza | Akụkọ njem
Ibiza Ọ dị na Mediterenian na ọ bụ akụkụ nke agwaetiti Balearic, o nwere kilomita 210 nke oke osimiri na ụfọdụ n'ime osimiri ndị ama ama na mara mma na Spain. Ị maara ha? Ị hụghị oge ọ ga -abụ ọkọchị 2022 ịga kporie ndụ?
Taa, na Actualidad Viajes anyị maara osimiri kacha mma na Ibiza yabụ kwadebe ntụaka ... na akpa akwa!
2 Oke osimiri kacha mma na Ibiza
Yana Menorca, Mallorca na Formentera bụ akụkụ nke agwaetiti Balearic. Akụkụ ya na ụsọ mmiri ya bụ nrọ, mana ọ bụ otu njem nlegharị anya na ụwa ezumike nke wurula n'ime afọ. Taa, Ibiza bụ otu ihe ahụ.
Ibiza dị kilomita 79 site n'ụsọ oké osimiri kọntinent, ọ nwere ihu igwe ọkụ ma ọ tawo ahụhụ nnukwu njem na narị afọ nke XNUMX. Ọtụtụ ndị obodo ya, nke ịda ogbenye wakporo, gafere oke osimiri gaa Algeria na Cuba. Narị afọ nke iri abụọ bịara nke ọma, gburugburu afọ '60 na '70, mgbe njem nleta malitere ito ma mepụta mmepe ya.
Taa ị sị Ibiza ị sị ndụ abalị, oriri, disko, osimiri na ndị na -eto eto.
A na -agụta ha gburugburu 80 osimiri n'ụsọ oké osimiri nke Ibiza ma enwere ntakịrị ihe niile, site n'ụsọ osimiri dị jụụ na izu ike na ebe dị anya ruo n'ụsọ osimiri ndị ama ama, okwute okwute, aja aja aja na oke osimiri mara mma.
N'ebe ọwụwa anyanwụ enwere a osimiri a ma ama nke ọma n'ihi na ọ nwere mmiri dị jụụ dị mma maka ụmụaka, na mgbakwunye na ụlọ ahịa na ụlọ nri gbara ya gburugburu. Ana m ekwu maka ya Cala Longa, ya na aja ọla edo ya na udi aak. N'ebe a ị nwere ike ịnwụ anwụ, mụta imikpu n'ime mmiri, igwu bọọlụ volleyball na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Osimiri nke dị nso n'obodo Ibiza n'onwe ya bụ Talamanca, ya na aja aja ọlaedo na mbadamba osisi. Ndị njem na ndị obodo na -eletakarị ya, enwere ụlọ nri nwere ọnụ ahịa nnu na ọ dị juputara na ndị na -eto eto mgbe ịgba bọọlụ. Ị nwere ike iche na n'ihi na ọ dị nso n'isi obodo enwere sooo nke ukwuu ndị mmadụ mana ọ bụghị otu a, ọkachasị n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie.
N'ebe ndịda bụ La Salinas, osimiri kacha eme ememme na Ibiza (ma ọ bụ ihe ha na -ekwu). Nwere okpoko-abalịA na -enwe ndị na -eto eto mgbe niile, ị nwere ike ịgba egwu mgbe niile n'ájá, rie nri ehihie, nri abalị ma ọ bụ zuru ike. Iji nwekwuo udo ma nwee ọ enjoyụ okike, ọ bụ ebe Ogige Ntụrụndụ Las Salinas Ọzọkwa, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịga ije na ụlọ elu nlegharị anya na nsọtụ ndịda nke agwaetiti ahụ ebe enwere obere coves n'ebe ahụ.
Cala d'Hort sitere na aja aja ọ nwekwara ọmarịcha echiche banyere agwaetiti Es Vedra, na mbara igwe, narị mita ole na ole site n'ụsọ osimiri. Enwere ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, na n'oge dị elu enwere ezigbo mmadụ na -anụ ụtọ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, na -abịa ma na -esi n'ụgbọ mmiri kwụdoro n'oké osimiri.
La Playa d'en Bossa ọ sara mbara nke ukwuu, ọ bụ n'eziokwu osimiri kacha ogologo na Ibiza ma nwee klọb kacha ewu ewu, n'etiti ndị ọzọ juru ebe niile. Abalị na -amalite na disko mana ọ na -aga n'ihu n'akụkụ osimiri.
N'ebe ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ bụ Cala Conta, otu n'ime ndị mara mma maka ọtụtụ. Ọ nwere aja ọcha dị nro na mmiri doro anya, ọ mara mma mana enwere ndị mmadụ mgbe niile. Ị nwere ike gaa n'ehihie wee nọrọ tụgharịa uche n'ọdịda anyanwụ mara mma na ọla edo ma ọ bụ snorkel na ọdọ mmiri ndị dị n'ụsọ oké osimiri, n'etiti okwute ...
Caladeta bụ pearl ọzọ n'ime Ọdịda Anyanwụ, wee ruo ebe ahụ, ị ​​ga -agafe ụfọdụ okwute. Ọ bụ obere mmiri nwere aja aja ọla edo na mmiri doro anya kristal. Ndị ị ga -ahụ na -abụkarị ụmụaka ma na -ebute nri na ihe ọ drinkụ drinkụ ha ka ha nọrọ ụbọchị dị ka enweghị ụlọ mmanya n'akụkụ osimiri na anya. N'ezie, ọ dị ka a na -ere mmanya. Ọzọkwa n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ bụ Cala Tarida, osimiri nke ezinaụlọ na ndị njem nleta na ndị obodo na ndị di na nwunye na -agakarị.
Na Cala Tarida enwere disko, ụlọ nri, mmiri dị jụụ na nke doro anya, ihe niile na -eme ka ọ bụrụ na oge ọkọchị ọ bụ oke osimiri nke na -agbawa. Ọ bụrụ na -amasị gị ihe dị nwayọ, ị ga -aga na ugwu ebe enwere obere coves.
Na ụsọ mmiri nke ugwu? Nke a bụ Mmiri Ọcha, ájá ájá ọcha gbara ya gburugburu nnukwu ọnụ ọnụ ugwu. Bụ a osimiri naturist na ndị obodo a na -etinyekarị anya na oke ndịda ụsọ oké osimiri. Mgbe ikuku dị, a na -akpụpụta obere ebili mmiri, yana crests na -acha ọcha, ya mere aha ahụ. Ọ bụ nnukwu ebe ịhụ ọwụwa anyanwụ.
Ọzọkwa n'ụsọ oké osimiri nke ugwu bụ Benirras osimiri, gbara ya gburugburu ugwu na pine, n'etiti ájá, okwute na okwute. Mmiri, doro anya ma dịkwa oke egwu. Ọ bụ osimiri nke Mkpisi Chukwu na ọdịda anyanwụ bụ ihe sitere na ụwa ọzọ. Ha na -ekwu na ụbọchị kacha mma iji gaa n'ụsọ osimiri a bụ Sọnde mgbe a haziri ahịa mpaghara. N’oge dị elu, bọs na -abịarute, ọ gaghị ekwe omume iji ụgbọ ala rute ebe ọ bụ na okporo ụzọ emechiri emechi.
La Cala Jonal Ọ bụ mkpuchi eke sitere n'okike mara mma, nwere osisi pine na ụlọ mara mma. ebe a bụ Ụlọ oriri na nkwari abalị Blue Marlin, ebe ọtụtụ ndị ama ama na -aga. Ọ bụ okwute okwute na mara mma nke ukwuu ma a bịa n'ihe iri ihe, ị drinkingụ ihe ọ ,ụ ,ụ, ikpori ndụ ka a hụkwa ya. Ihe ọzọ na -ewu ewu maka disko ya bụ Cala Bassa, nwere aja ọcha na ọ fọrọ nke nta postal. Nke a bụ Cala Bassa Beach Club, iri nri, ị drinkụ mmanya na ịgba egwu.
Ị nwere ike rute Cala Bassa n'ime nkeji iri na ise site na San Antonio n'iji bọs 15. Cala Xuclá bụ otu n'ime obere osimiri kacha arụzigharị na agwaetiti ahụ. Enweghị ụlọ mmanya, enweghị ụlọ ịsa ahụ, yana enweghị ọrụ enyere. Ọ bụ osimiri dị jụụ, nke dị jụụ, nke osisi pine gbara ya gburugburu, yana ụfọdụ ụgbọ mmiri ịkụ azụ na a ikuku dị oke mma.
Ọ Caleta Ọ bụ ụsọ osimiri okirikiri uhie gbara ya gburugburuHa na -echeta nnukwu kaniyon nke Colorado, na United States. Osimiri a dị naanị nkeji iri na ise site na obodo Ibiza. Ọ nwere mmiri dị jụụ, n'ihi nke a ọ makwara nke ọma, enwerekwa ụlọ oriri na ọ popularụ popularụ a ma ama nke na -enye azụ na ihe oriri dị ụtọ. A na -ewu ewu n'ụsọ osimiri mana ọnụ ọnụ ya na -enye ya mmetụta nke nzuzo.
N'ezie, ihe ndị a abụghị naanị Osimiri IbizaEnwere ọtụtụ ndị ọzọ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ha wee bie ahụmịhe Ibiza ... atụfula 20222!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ibiza » Oke osimiri kacha mma na Ibiza